Culture - Suzhou Ocan Polymer Ihe Co., Ltd
1. Anyị Mission: akwalite mmepe nke ihe onwunwe ụlọ ọrụ, Mee ndụ mma na technology
Ụlọọrụ ozi bụ nzube na ihe mere nke enterprise adị na mkpa nke enterprise lanarị na mmepe. Ọ na-adịkarị eji na-akọwa enterprise uru na nke ikpeazụ ulo oru mgbaru ọsọ ma na-eduzi. Ezubere iche elu polima ihe onwunwe, anyị ụlọ ọrụ na-tumadi aku R & D na n'ichepụta nile di iche iche nke ihe onwunwe ngwaahịa izute amụba ihe onwunwe na ndụ mkpa nke ndị mmadụ. Mgbalị ndị anyị na ihe onwunwe na ụlọ ọrụ ga-maa-akwalite mmepe nke Chinese ihe ụlọ ọrụ. The ọrụ na-eji ọkụ ka ha ndụ ihe adaba na mma n'ihi na ha na-eji anyị na-ozugbo ma ọ bụ n'ụzọ.
Anyị na-eme ụlọọrụ ozi si abstraction ka anya site "Eme mmepe nke ihe onwunwe ụlọ ọrụ, Mee ndụ mma na technology", nke na-eweta ihe mmekọrita na vitality nke ngwaahịa na ụlọọrụ image, valuing elu na-elekọta mmadụ ọnọdụ nke anyị ụlọ ọrụ.
2. Anyị Vision: Ka ịmepụta a mbụ na klas na mba enterprise ma na-na-eduga brand na ndị ụlọ ọrụ
Ụlọọrụ ọhụụ bụ nnọọ a ogologo oge plan, ihe mgbaru ọsọ kasịnụ, ọbụna a elu-profaịlụ atụmanya na a development direction. Ịtụ Egwu obi ike na mmụọ nsọ bụ a kwesịrị maka ihe enterprise nweta siri ịga nke ọma na di ọku ịsọ mpi, anyị ọrụ na-ume ije na-atụ, jiri obi ike na ogologo njem. Anyị na-agbalịsi ike na-ebute ụzọ na ihe onwunwe ubi ma welie China si mba ụlọ ọrụ dị ka akụkụ nke Chinese aku na uba. Anyị ọhụụ bụ nnọọ ike a mbụ na klas na mba enterprise ma na-na-eduga brand na njem.
II. anyị Spirit
Ụlọọrụ spirit bụ ụdị otu nsụhọ jikọtara oge a nsụhọ na ụlọọrụ àgwà. Ọ bụ mgbe chịkọtara n'ụdị nkenke na nkà ihe ọmụma asụsụ na n'ụzọ doro anya kwupụtara factory song, factory motto, factory ụkpụrụ na factory emblem. N'ozuzu, a kọwara dị ka ndị nkịtị àgwà, uche na echiche na-akọrọ site niile ma ọ bụ ọtụtụ n'ime ọrụ, ụlọọrụ spirit pụrụ ịkpali ndị ịnụ ọkụ n'obi na nke ọrụ ma na-ewusi vitality nke enterprise. Dị ka echiche zuru ọrụ otu echiche set, ọ bụ na obi nke azụmahịa nkà ihe ọmụma, uru criterion na management n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ maka enterprise na bụkwa nkume isi nkuku nke ụlọọrụ omenala.
Anyị Corporate Spirit:
Ịdị n'Otu & Mgba, Ịsụ ụzọ & Innovation, arara onwe & Nsọpụrụ, Credible Operation
Quality & arụmọrụ, Mutual Rite Uru, arụ Excellence, Final Mmejuputa